यी नेता कुन पार्टीका हुन् ? तिनका श्रीमतीका सारीको रंग हेरेर थाहा पाउनोस् – मनुसन्धानकर्ताहरु… « Gajureal
यी नेता कुन पार्टीका हुन् ? तिनका श्रीमतीका सारीको रंग हेरेर थाहा पाउनोस् – मनुसन्धानकर्ताहरु…
प्रकाशित मिति: २६ श्रावण २०७५, शनिबार ०६:०४
दश/बाह्र बर्ष अगाडीसम्म नेताहरु परैबाट चिनिन्थ्यो । राजाबादीहरु दौरा सुरुवालमा चिटिक्क देखिन्छे, कांग्रेसीहरु टाइसुटमा गमक्क सजिन्थे, कम्युनिष्टहरु सर्ट पाईन्टमा लिख्रिक्क भेटिन्थे । लवाई खुवाईका आधारमा को कुन पार्टीको नेता हो, प्रष्टै चिनिन्थ्यो । अहिलेको त्यस्तो छैन । चिल्लो अनुहार देखेर ‘जय नेपाल’ भनेको मान्छे ‘नेकपा’को केन्द्रिय नेता हुन्छ । फुश्रो मुहार देखेर ‘लाल सलाम’ भनिएको मान्छे ‘कांग्रेस’को नेता हुन्छ ।
आज बिचारमा ‘क्रान्तिकारीता’ बोकेको मान्छे, ब्यवाहारमा ‘भ्रान्ति’तिर लागेको हुनसक्छ । बुर्जुवा बिचार बोक्ने ब्यवहारमा प्रगतिशिल हुनसक्छ । सुदुर पश्चिमका एकजना ब्यापारीले भने, ‘चन्दा माग्नेले हैरान पारे, को कुन पार्टीको हो, कसरी चिन्ने ?’ मैले आफ्नो अनुभव सुनाऐं–‘ उनिहरुको सवारी हेरेर खुट्याउनोस् । ‘कांग्रेस हो भने पजेरोमा आउँछ, नेकपा हो भने बाईकमा र क्रान्तीकारी साइर्कलमा आउँछ ।’
उनले निधार खुम्च्याउंदै भने– ‘त्यो शूत्र फेल भैसक्यो । अहिले त माओवादी स्र्कोपियोमा, नेकपा बोलेरोमा र मधेशवादीहरु प्राडो र पजेरो आउँछन् ।’ अहिले गाडी नहुने त गणतन्त्रवादी हुनै सक्दैन किनकी यो गणतन्त्र हैन गाडीतन्त्र हो । पार्टी चिन्न चिया शूत्रपनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । चन्दा मााग्न आउनेलाई सोध्नोस्, ‘चिया लिउँ कि कफी ?’ कफि मागे पार्टीको मान्छे, चिया मागे ‘पाती पढ्ने मान्छे’ रहेछ भन्ने बुझ्नोस् । ‘चिसोपर्दाथ’ माग्यो भने ‘पार्टी खाने मान्छे’ हो, बुझिहाल्नोस् ।’
अझै नजिकबाट चिन्न कफिलाई पनि ‘जेनेरेलाइज’ गर्नोस् ।’ ‘कुन कफि ल्याउँ’ भनेर सोध्नोस् । क्रान्तीकारीले भन्ने छ– कडा ब्ल्याक कफि ल्याउनोस् । कांग्रेसले भन्ने छ– मिल्क कफि ल्याउनोस्, मिठ्ठो बनाएर । नेकपाले भन्नेछ–जुन भएपनि भैहाल्छ, एउटा ल्याउनोस् न । मधेशवादीले चिया कदापी माग्ने छैनन किनभने उनिहरुलाई लाग्ने छ– चिया पहाडको उत्पादन हो । मात्रै कफिप्रतिपनि उनिहरुको आशक्ति नहुनसक्छ किनभने त्यो पहाडिया अहंकारबादको प्रतिक हो । चिया र कफिको साटो ‘चाय’ अर्डर गर्नेछन् ।
कुन नेताको मान्छे हो भन्ने पनि चिन्ने शूत्र छ । प्रचण्डको मान्छे हुन् भने भन्ने छन्– निश्चित रुपमा कफि नै पिउनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याई छ । बाबुरामकोम मान्छेको ‘ठम्याई हुंदैन, ‘कफि पिउनुपर्छ कि भन्ने लाईरा’ हुन्छ । उता बैद्यका मान्छेले भन्नेछन– कफि पिउनुपर्छ भनेर भन्नोस् ।’
अहिले नेकपामा पनि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी प्रष्ट चिनिन्छ । त्यसकालागि ‘मसलाशूत्र’ प्रयोग गर्नुपर्छ । प्लेटमा बिभिन्न थरीमा मसलाई राखेर उसको अगाडी राख्नोस् । ओली लाईनको मान्छेले दुईटुक्रा सुपारी लिनेछ किनभने किनभने भने ओलीजीको जिल्ला झापामा धेरै सुपारी फल्दछ । खनाल लाईनको मान्छेले सुपारी छुँदा पनि छुँदैन किनभने झलनथको गृहजिल्ला इलाममा फल्ने अलैंचीतिरै हात लम्काउनेछ । जहाँ सम्म माधव नेपालका मान्छेको कुरा छ –उसले सुपारी र अलैंची दुवै टिपेर मुखमा हाल्दै भन्ने छ– ‘आफु त पान धेरै खाने रौतहट जिल्लाका नेताको मान्छे परियो ।’ यो त कार्यकर्ता चिन्ने तरिका भयो अब नेता चिन्ने उपाय पनि छ । नेता कुन पार्टीको हो भन्ने थाहा पाउन उनका श्रीमतीको सारी र छोराछोरीले चढ्ने गाडीबाट थाहा हुन्छ । बृस्तित बिवरण आगामी अंकमा ।